Florida Data Services Recovery | Technology LC | Data Recovery
Florida Data Services Recovery
Home → Florida Data Services Recovery
LC Technology waxay bixisaa adeegyada soo kabashada xogta ee dhammaan noocyada Media Digital, oo lagu daray soo kabashada drive adag. Sida mid ka mid ah Maraykanka’ ugu weyn shirkadaha adeegyada kabashada xogta xasuusta flash, LC Technology waxay bixisaa adeeg gaar ah oo qof walba ka laylis si xirfad leh u. Our adeegyada Florida soo kabashada xogta soo kaban karo kasta iyo nooc kasta oo xogta. Si qalad ah aad u tirtiray files xogta, images, videos ama files audio ka media, formatted ama baxay warbaahinta inta ay socoto waxaad u qortaa a? Adeegyada Our kabashada xogta bogsan karaan faylasha aad iyo dib u helaan xogta aad.
Our kabashada xogta shaybaar adeegyada Florida yihiin deegaanno aamin ah oo leh dhammaan xogta macaamiisha dhawray gaarka ah. Kontoroolo helitaanka shaybaarka waxaa loola jeedaa oo keliya ku takhasusay ku haboon xamili warbixin xasaasi ah. si joogto ah waxaan qandaraas inuu ka soo kabsado xogta xogo dowladda, hay'adaha fulinta sharciga iyo hay'adaha gaarka ah. Technology LC waxaa caadaysteen in ay heerka gaarka ah iyo ilaalinta in lagu tilmaamay qalabka u baahan. Dhammaan waraaqaha soo kabsaday ayaa la joogto ah ku qoysay oo ka dib 30 maalmood.
Ka hor inta diraya warbaahinta rayshada, fadlan soo wac si ay ula mid ka mid ah wakiilada ku hadlaan:
• Toll-Free Maraykanka ee: 1-866-603-2195
• ka baxsan Maraykanka: 1-727-449-0891
Our qiimaha guri-fee adeegyada warbaahinta flash kabashada xogta ka mid ah dib u soo kabashada ee xogta si aad u CD ama DVD (ama on drive USB, waayo, wax yar oo dheeraad ah a) oo ay soo noqdaan maraakiibta. Waayo, kabsanaya ka baxsan Maraykanka, an lacag dheeraad ah maraakiibta lagu darayaa. No lacag kale oo aan ahayn maraakiibta laabto haddii aanan heli faylasha aad!
Adeegga Recovery for Media Digital ilaa 2GB – $125
Surcharge warbaahinta jir ahaan dhaawacan (i.e.. isku xira jebiyey, iwm) – $100
Adeegga Recovery for Digital Media 4GB – $150
Adeegga Recovery for Digital Media 8GB – $175
Adeegga Recovery for Digital Media 16GB – $225
Adeegga Recovery for Digital Media 32GB – $275
Adeegga Recovery for Digital Media 64GB – $325
Adeegga Recovery for Digital Media 128GB – $375
Adeegga Recovery for Digital Media 256GB iyo in ka badan – $425
Adeegga Recovery for Digital Media 512GB iyo in ka badan – $475
Adeegga Recovery for Digital Media 1TB iyo in ka badan – $525
U dir oo dhamaystiran Form Recovery iyo warbaahinta cinwaanka hoos ku qoran.
LC Technology waxay bixisaa adeegyada soo kabashada xogta ee dhammaan noocyada SanDisk® warbaahinta digital. Adeeggani waa diyaar u ah dhammaan warbaahinta digital SanDisk® at heerka guri ku salaysan awoodda kaydinta warbaahinta ee. Our qiimaha guri-lacag-celinta warbaahinta flash waxaa ka mid ah dib u soo kabashada ee xogta si aad u CD ama DVD (ama on drive USB, waayo, wax yar oo dheeraad ah a) oo ay soo noqdaan maraakiibta. Waayo, kabsanaya ka baxsan Maraykanka, an lacag dheeraad ah maraakiibta lagu darayaa. No lacag kale oo aan ahayn maraakiibta laabto haddii aanan heli faylasha aad!
SanDisk® Digital Media Recovery ilaa 2GB – $125
SanDisk® Digital Media Recovery 256GB iyo in ka badan – $425
SanDisk® Digital Media Recovery 512GB iyo in ka badan – $475
SanDisk® Digital Media Recovery 1TB iyo in ka badan – $525
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan our warbaahinta digital adeegyada kabashada, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 ama (727) 449-0891 ka baxsan Maraykanka si ay ula wakiilka macaamiisha la hadasho. Yurub iyo Australia martida fadlan booqo adeegyada kabashada LC Tech UK.
Fadlan markab warbaahinta aad cinwaanka soo socda (macluumaadkan ayaa waxaa sidoo kale ku qoran foomka dib u soo kabashada):
Hubi in aad kobo warbaahinta aad mailer adag, waxaa u fiirso sida ay ku jiraan Electronic Media – ma bandhigan beeraha magnetic. Markaasuu, u soo dir by USPS, UPS, FedEx, Hawada ama hab kasta maraakiibta u ogolaanaya xirmo si ay isha loogu hayn. Fadlan hubi kaarka waa aamin iyo cinwaanka saxda ah waa. LC Technology International, Inc. mas'uul ka ah kaararka in ay ka lumaan ama ay waxyeello in maraakiibta ma aha.
LC Technology waxay bixisaa adeegyada soo kabashada xogta drive adag tahay waqtiyada halkaas oo loo baahan yahay dib u soo kabashada ka baxsan awoodda ah dhamaadka-user kuwa. Tani waxay noqon kartaa dib u soo kabashada foreensiga, kabashada xogta ama waxyeelo ay ku drive adag. Heerarka waxay ku saleysan yihiin falanqaynta guri lacag ah drive iyo qadarka wakhti qaatay dib u soo kabashada.
Sababo la xiriira dabeecadda sax ah ee drives adag iyo nooca kala duwan ee arrimaha caadi ahaan la kulmeen, binta kabashada kala duwanaan doonaa iyada oo ku xiran nooca dhaawac ka helay inta lagu guda jiro qiimaynta hore our. dheeraad ah, waayo, arrays weerar iyo drives adag in la furay.
macquul ah / Fayl Burburka System: Sida ugu hooseysaa $750
jirka / Burburka Qeybta: Sida ugu hooseysaa $1500
FIIRO GAAR AH: Waxaa jira non-celin qiimaha lacagta guri of a $100 per drive qiimaynta ee soo kabashada drive. Haddii aad doorato in aad hore u soo kabashada tagaan, lacag in laga codsadaa in ay kharashka soo kabashada.
Helitaanka bilaabay waa u fududahay – dib u helaan xogta aad!
Download our foomka maraakiibta drive adag, buuxinta foomka, saxiix, oo ka mid ah oo aad drive marka aad u markab noo.
Riix halkan si aad foomka maraakiibta drive adag
Xidhmada drive si taxadar leh si looga fogaado dhaawac maraakiibta iyo doonnida oo cinwaanka our kor ku xusan.
Xidhmada drive si waafaqsan talo soo saaraha ee maraakiibta drives adag. Calaamadee xirmo sida ay ku jiraan Electronic Media – ma bandhigan beeraha magnetic. Waxaad u dirtaa by USPS, UPS, FedEx, Hawada ama hab kasta maraakiibta u ogolaanaya xirmo si ay isha loogu hayn. Fadlan caymiyaan drive iyo double hubi taabanaya. LC Technology International, Inc. mas'uul ka ah baakadaha in ay ka lumaan ama ay waxyeello in maraakiibta ma aha.
Haddii aad rabto in aad bixiso lacag qiimaynta ka hor by credit card, fadlan riix add si button gaadhigii hoos:
Fee Qiimeynta Service Recovery Drive Hard – $100
shuruudaha iyo xaaladaha qaarkood codsan.
If you have any questions regarding our hard drive recovery services, please call us Toll Free in the US at (866) 603-2195 ama (727) 449-0891 ka baxsan laga xoreeyo dalka ah. in la wakiilka macaamiisha la hadasho. Yurub iyo Australia martida fadlan booqo adeegyada kabashada LC Tech UK.